Sidee Apple Watch u cabirtaa garaaca wadnahaaga | Wararka IPhone
Isla marka aad raacdo warka Apple Watch, hubaal waad ogaan doontaa mid ka mid ah astaamaheeda waaweyn: dareenka garaaca wadnaha. Saacadda Apple-ka ayaa awoodi doonta inay kuu sheegto inta jeer ee garaaca wadnahaagu. Tani waqti dheer kahor ma ahan aalad loo qoondeeyay aalado aad qaali u ah laakiin inyar inyar ayaa guud laga dhigay oo hadda ma jiro qalab smartwatch ama quantifier ah oo qiimihiisu cusbo ku leeyahay oo aan lagu darin. Sidee ayay u eegtaa Apple Watch garaaca wadnaha maxayna ugu isticmaashaa xogtaas? Apple ayaa noo sharraxaysa.
1 Sawir qaadista sawir qaadista
2 Toban daqiiqo kasta
3 Cabir lagu kalsoonaan karo laakiin nuanced ah
Sawir qaadista sawir qaadista
Farsamada u saamaxaysa Apple Watch inay ogaato heerka garaaca wadnaheenna loo yaqaan "photoplethysmography." Waxay ka kooban tahay wax aan ka badnayn u dirista iftiin cagaaran maqaarkayaga iyo ogaanshaha waxa nuugaya. Taasi waa waxa ay yihiin afartaas dareemayaal qeybta hoose ee saacaddu. Muxuu iftiinka cagaaran ku leeyahay garaaca wadnaheena? Dhiiggu waa casaan, taas oo macnaheedu yahay inay ka tarjumeyso iftiinka cas (waa sababta aan ugu aragno midabkaas) waxayna nuugtaa iftiinka cagaaran. Marka wadnuhu garaaco, dhiig badan ayaa dhex mara jidhkeenna, sidaa darteed wuxuu nuugaa laydh cagaaran oo badan. Markaad il biriqdo boqol jeer ilbidhiqsigii, waxaan markaa ku garan karnaa garaaca wadnahayaga. Sida laga soo xigtay Apple, waxay sidoo kale isticmaashaa iftiinka infrared si loo qiyaaso.
Toban daqiiqo kasta
Maxuu Apple ku sameeyaa macluumaadkan? Apple Watch waxay cabirtaa garaaca wadnahaaga tobankii daqiiqaba. Macluumaadkan, waxaad ku ogaanaysaa si sax ah kalooriyada aad isticmaashid maalinta oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, inta lagu guda jiro jimicsiga, waa la qiyaasayaa si isdaba-joog ah waana tan sida looga muujiyo shaashadda saacadda. Adigoon jimicsi samayn, waxaad sidoo kale hubin kartaa garaaca wadnahaaga waqti kasta adoo isticmaalaya ikhtiyaarka "jaleecada" (jalleec deg deg ah) ee saacadaada.
Cabir lagu kalsoonaan karo laakiin nuanced ah
Qaabkan lagu cabbirayo garaaca wadnaha ayaa lagu kalsoonaan karaa marka xaaladaha lagu sameynayo ay yihiin kuwa ugu wanaagsan. Tusaale ahaan, iyadoon qabow badani jirin, dhiiga maqaarkayaga marayaa aad ayuu uga yaryahay marka uu kululaado, taas oo saameyn ku yeelan karta cabirkan. Waxa kale oo dhibaatooyin ka imaan doona laylisyada dhaqdhaqaaqyada cududdeennu ay yihiin kuwo aan caadi ahayn oo si kadis ah u dhaca (feer, tennis, tennis paddle ...). Ma yahay Tani waa sababta ay xirfadlayaashu u isticmaalaan xargaha xabadka si loo xakameeyo garaaca wadnahaaga, hab aan raaxo lahayn oo u baahan qalab kale laakiin aad loogu kalsoonaan karo. Apple xitaa waxay muujineysaa in kooxahani ay la jaan qaadayaan Apple Watch ilaa iyo inta ay leeyihiin isku xirnaanta Bluetooth.
Si loo helo natiijo wanaagsan Apple waxay ku talineysaa in saacadda lagu hagaajiyo curcurka. Uma baahna inuu ahaado mid ciriiri badan, laakiin wuxuu u baahan yahay inuu ahaado mid jilicsan si dareemayaasha ay xiriir toos ah ula yeeshaan maqaarka. Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaadan ku isticmaalin gacanteena "ugu faa iidada badan", taasi waa, hadii aan nahay midigta waxaan ku xiranaa curcurka bidix iyo taa caksigeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Sida ay Apple Watch u cabirto garaaca wadnahaaga
Kirk Hammett oo ka tirsan Metallica ayaa lumiyay iphone-kiisa oo ay la socdaan 250 riff oo aan lahayn wax kayd ah